Amakhaya Atyunjiweyo eBerlin, Maryland
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Amakhaya okuhlala Amakhaya Atyunjiweyo Maryland EBerlin
Num. zegumbi lokuhlambela
Ukuxelwa kwangaphambili yinkqubo yezomthetho apho umbolekisi azama ukubuyisa imali eseleyo kwimali mboleko kulowo ubolekayo, eyekile ukwenza intlawulo kulowo obolekayo, ngokunyanzelisa ukuthengiswa kwempahla esetyenzisiweyo njengemali mboleko yemali mboleko.  Ngokwasekuqaleni, umntu obolekayo (umntu obolekayo), okanye omnye umntu obambe ityala, ufumana ukuyekiswa komntu obolekayo kwimali mboleko (umbolekisi) ilungelo elilinganisiweyo lentlawulelo, nokuba kungomyalelo wenkundla okanye ngokusebenza komthetho (emva kokulandela inkqubo ethile esemthethweni).  Ngokwesiqhelo Umbolekisi ufumana inzala yezokhuseleko kumbolekisi obambise ityala okanye abambise iimpahla ezinjengendlu ukukhusela imali mboleko. Ukuba umntu obolekayo umxhasi kwaye umbolekisi uzama ukubuyisa ipropathi, iinkundla zokulingana zinokumnika lowo ubolekayo ilungelo elinganayo lokuhlawulela xa umbolekisi ebuyisela ityala. Ngelixa eli lungelo lilinganayo likho, lilifu elikwisihloko kwaye umbolekisi akanakuqiniseka ukuba banakho ukuyibuyisa kwakhona ipropathi leyo.  Ke, ngenkqubo yokuxelwa kwangaphambili, umbolekisi ufuna ukubhengeza (ngesiNgesi esicacileyo, ukupheliswa kwangoko) ilungelo elilinganayo lentlawulelo kwaye uthathe itayitile yomthetho kunye nokulinganayo kwipropathi ngerhafu elula. [I-4] Abanye abanikazi bamatyala banokubonakalisa ilungelo lomnini wokuhlawulelwa amanye amatyala, njengeerhafu ezigqithileyo, amatyala eekhontrakthi angahlawulwanga okanye abanini bamakhaya abatyala ngaphezulu Umbutho kufuneka
I-Berlin (; ibinzana lesiJamani: [bɛɐ̯ˈliːn] (mamela) lilona dolophu likhulu nedolophu enkulu yaseJamani ngommandla nabemi. Abemi bayo be-3,748,148 (2018) bayenza isixeko sesibini esinezona zixeko zichanekileyo kwi-European Union emva kweLondon. Isixeko sesinye sezizwe zaseJamani ze16. Ijikelezwe ngurhulumente waseBrandenburg, kwaye idibene nekomkhulu layo, iPotsdam. Ezi zixeko zibini zikumbindi wedolophu yaseBerlin-Brandenburg, oku kukuthi, inabemi abazizigidi ezithandathu kunye nendawo engaphezulu kwe-30,000 km², idolophu yesithathu ngobukhulu yedolophu enkulu yedolophu emva kweRhine-Ruhr neRhine-Main imimandla. IBerlin ijikeleza elunxwemeni loMlanjana weSpree, ongena kuMlambo Havel (umda woMlambo iElbe) kwimpuma yeSpandau. Phakathi kweyona ndawo iphambili edolophini kukho amachibi amaninzi asentshona nasempuma-mpuma asekwa yi-Spree, Havel, kunye nemilambo ye-Dahme (elona likhulu yiLake Müggelsee). Ngenxa yokuma kwayo kwiThafa yaseYurophu, iBerlin ichukunyiswa yimozulu ethambileyo yonyaka. Malunga nesinye kwisithathu sendawo esi sixeko sibunjwe ngamahlathi, iipaki, iigadi, imilambo, imilambo kunye namachibi. Esi sixeko simi kwindawo ephakathi kwe-Jamani ye-dialect, ulwimi lwase-Berlin luluhlu lweeLusarus-New Marchian dialog. Ukubhalwa okokuqala kwinkulungwane ye-13th kwaye ikumda wokuwela iindlela ezimbini zembali ezibalulekileyo zorhwebo, iBerlin yaba likomkhulu leMargraviate yaseBrandenburg (1417-1701), uBukumkani bePrussia (1701-1918), uBukhosi baseJamani (1871-1918 ), iRiphabhliki ye-Weimar (1919-1933), kunye ne-Reich yesiThathu (1933-1945). IBerlin kwii1920s yayingumasipala wesithathu ngobukhulu emhlabeni. Emva kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi kunye nokuhlala kwayo emva kwamazwe ophumeleleyo, isixeko sahlukana; I-West Berlin yaba ngumzi ocekeceke waseNtshona Jamani, ejikelezwe yi-Berlin Wall (1961-1989) kunye ne-East Germany area. IMpuma yeBerlin yabhengezwa njengekomkhulu leMpuma Jamani, ngelixa uBonn waba likomkhulu laseNtshona Jamani. Ukulandela ukuhlangana kwakhona kweJamani kwi1990, iBerlin yaphinda yaba likomkhulu layo yonke iJamani. IBerlin sisixeko sehlabathi kwinkcubeko, kwezopolitiko, kwimidiya nakwisayensi. Uqoqosho lwayo lusekwe kwimizi-mveliso ekumgangatho ophezulu kunye necandelo leenkonzo, elibandakanya uluhlu olwahlukeneyo lwamashishini okudala, amaziko ophando, amaziko eendaba kunye neendawo zendibano. IBerlin isebenza njengendawo yokugcina umoya kunye nokuhamba kwezithuthi zikaloliwe kwaye inethiwekhi yothutho loluntu olunzima kakhulu. Imetropolis yindawo ethandwa ngabakhenkethi. Amashishini abalulekileyo abandakanya i-IT, amayeza okuvelisa amayeza, ubunjineli bendalo, ubuchwepheshe obucocekileyo, ubuchwephesha bebhayoloji, ulwakhiwo kunye nezinto zombane. IBerlin likhaya kwiiyunivesithi ezidumileyo zehlabathi, ii-orchestras, iimyuziyam, kunye neendawo zokuzonwabisa, kwaye ibambe iminyhadala yemidlalo. Isitiya sayo seZoological yeyona zoo ityelelwa kakhulu eYurophu kwaye yenye yezona zidumileyo emhlabeni jikelele. Ngobuntshatsheli bomdlalo bhanyabhanya omkhulu kunayo yonke ehlabathini, iBerlin yindawo ethandwa njengeyona mveliso yefilimu yamazwe aphesheya. Esi sixeko saziwa ngeminyhadala yaso, uyilo olwahlukeneyo, ubomi bobusuku, ubugcisa beli xesha kunye nenqanaba eliphezulu lokuphila. Ukusukela i2000s iBerlin ibone ukuvela kwesahlulo sosomashishini kwindalo yonke.
I-India (ISO: i-Bhārat), ekwabizwa ngokuba yiRiphabhlikhi yase-India (ISO: Bhārat Gaṇarājya), lilizwe elikuMazantsi e-Asia. Lilizwe lesixhenxe ngobukhulu ngommandla, lilizwe lesibini ngobuninzi, kwaye lelona lizwe lifanelekileyo kulawulo lwentando yesininzi. Ukhuselwe luLwandlekazi i-Indiya emazantsi, kuLwandle lweArabia kumazantsi-mpuma, kunye ne-Bay ye-Bengal kumazantsi mpuma, wabelana ngemida yomhlaba kunye nePakistan entshona; IChina, Nepal, neBhutan ukuya ngasempuma-mpuma; kunye neBangladesh neMyanmar ukuya empuma. KuLwandlekazi lwaseIndiya, iIndiya ikummandla weSri Lanka naseMaldives; I-Andaman kunye neZiqithi zeNicobar babelana ngomda weelwandle neThailand ne-Indonesia. Indawo engaphantsi yeIndiya yayilikhaya le-Indus Valley Impucuko yexesha lobhedu. Kwiminyaka yesinyithi yaseIndiya, izibhalo ezindala zamaHindu zazibhalwa, kwavela udlwabevu loluntu olusekwe kwikhasethi, kwavela ubuBhuda nobuJainism. Ukudityaniswa kwezopolitiko kwenzeke phantsi kweMaurya kunye noGupta Empires; I-peninsular Middle Kingdoms yaphembelela amasiko akumzantsi-mpuma Asia. Ngexesha lamaIndiya aphakathi, ubuYuda, ubuZoroastrianism, ubuKristu kunye no-Islam bafika, kwaye kwavela ubuSikh, bongeza kwinkcubeko eyahlukeneyo. INorth India yehla kwi-Delhi Sultanate; emazantsi eIndiya ahlanganiswe phantsi kobukumkani baseVijayanagara. Kwasekuqaleni kwale mihla, uBukhosi baseMughal obandayo balandelwa ngumgaqo weNkampani ye-East India. Ubudala bala maxesha eIndiya babuphawulwa ngumgaqo waseBrithani woLawulo lweNqanawa kunye nombutho wobuzwe abathi, phantsi kukaMahatma Gandhi, waphawulelwa ukungahambelani kwaye wakhokelela kwinkululeko yaseIndiya kwi-1947. Inkululeko yezoqoqosho, eqale nge-1991, ibangele i-India ukuba ikhule ngokukhawuleza kwezoqoqosho kunye nelizwe elisanda kuphuhliswa. Imveliso yayo yekhaya iphela iba kwinqanaba lesithandathu kwihlabathi kumaxabiso otshintshiselwano kunye nesithathu ekuthengeni amandla ombuso. Ingeniso yayo nganye ikhokelela kwi-133rd kunye ne-116th kula manyathelo mabini. I-India ijongene nemiceli mngeni yentlupheko, urhwaphilizo, ukungondleki, kunye nokunakekelwa kwezempilo okungekho mthethweni. Isizwe esinezixhobo zenyukliya kunye namandla emimandla, sinesibini kwisizwe esisebenzayo emkhosini kwaye sikwindawo ephezulu kwinkcitho yomkhosi. I-Indiya yiriphabliki yephaneli, e-federal, elawulwa kwinkqubo yedemokhrasi, kwaye ilawulwa kumazwe e-29 kunye nemimandla esixhenxe yomanyano. Uluntu olunobuninzi, olwahlukeneyo kunye noluntu oluninzi, i-India likhaya labantu abayi-billion ze-1.3. Ikwalikhaya kwiyantlukwano ephezulu yezilwanyana zasendle kwiindlela ezahlukeneyo zokuhlala ezikhuselweyo.